Ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị ka unu chefuo ụbọchị ndị ahụ gara aga. Nꞌoge ahụ ìhè Chineke mụkwasịrị unu, unu guzosikwara ike ọ bụladị nꞌọnọdụ mkpagbu.
Ọ bụ anyị nile na-ebukọ agha a nꞌotu. Mụ onwe m ahụọla ahụhụ nꞌihi Kraịst nꞌoge gara aga. Ma ruo ugbu a, unu na-ahụkwa na m nọkwa nꞌime ahụhụ dị ukwuu, dị ka unu maara.
 Nꞌihi na nwoke bụ isi nwụnye ya, dị ka Kraịst siri bụrụ isi nzukọ ya bụ chọọchị, na onye nzọpụta nke nzukọ ahụ bụ anụ ahụ ya. Ya mere, dị ka nzukọ Kraịst si edo onwe ya nꞌokpuru Kraịst, otu a ka ụmụ nwanyị nwere di kwesịrị ido onwe ha nꞌokpuru di ha.
“Meere ndị ọzọ dị ka i si chọọ ka ha meere gị. Nke a bụ ihe Mosisi na ndị amụma ziri.